Abakhiqizi benkampani yaseChina, abasebenza ngokwezifiso benkinobho yensimbi - i-Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Inkinobho>Inkinobho yensimbi
Inkinobho ye-TS ezine-snap luhlobo lwenkinobho, eyaziwa ngokuthi i-snap, inkinobho yasentwasahlobo, inkinobho yokuthunga.Ibhande le-snap ezine lihlanganiswa nentwasahlobo yohlobo S, ehlukaniswe izingxenye ezine ze-ABCD kusuka phezulu kuye phansi.
I-cowboy buckle iqukethe inkinobho engenhla (ucezu A) nesipikili esingezansi (ucezu B). Lezi zingxenye ezimbili zihlanganiswe nemodi ye-A percussion.Ngenxa yokuthi ukuma kwenhlanganisela kubukeka kufana nomlingiswa waseChina we- "gong", kutholakale igama elithi "I character buckle", elaziwa nangokuthi "cowboy buckle".
I-Angle nail alias bump nail, i-rivet, i-nail ebukhali yakhiwe izingxenye ezimbili: i-nail cap (ucezu A) kanye ne-nail bottom (ucezu B). Ngokuvamile nge-I-buckle, i-jean buckle ukusetshenziswa okuhambisanayo kwezingubo ezijiyile, njenge amajini, amabhulukwe, njll.
Ummbila, owaziwa nangokuthi igesi, iso lesinkunzi, i-rivet engenalutho; Ngokuya ngesimo yilezi: ama-rivet anwetshiwe, ama-rivets amancane, amabele acindezelayo onqenqemeni, amabele ayindilinga, amabele ama-oval, amabele ayisicaba, amarobhothi agingqekayo, amarobhothi ayindilinga, amakhiqamu aqhakazayo, njll .; Ngokusho kwento: okusanhlamvu okusanhlamvu, i-aluminium corns, okusanhlamvu okwenziwe ngethusi, zinc alloy corns, cornless stainless corns, corn corns nokunye.
Izinkinobho ze-Metal Snap
Izinto: Insimbi / Ithusi
Usayizi: 10mm + 655, 12.5mm + 633, 15mm + 831, noma njengezidingo zamakhasimende
Umbala: Nickel, Gold, Antique zethusi, Gun metal, Umbala ngezifiso